I-Ovida Blue Anti-UV Wood Stick Umbrella ngokuzenzekelayo I-Wood Handle Custom Umbrella
Umbrella we-Ovida Blue Anti-UV Wood Stick Umbrella, Isambulela sokuDibanisa i-Uv, ukuHamba kwelanga ukukhusela isambrela
Isambrela somthi, isambrela somthi esikrwada, isambrela eside
Isambrela se-46inch, isambrela esizenzekelayo
IFreyimu eyomeleleyo ye-ULTRA: Ngelixa uninzi lweziambrela zolu bungakanani luqulathwe ngentsimbi shaft yentsimbi iimbambo ezinokuqhekeka okanye ukugoba, le Ovida isambulela ine-fiberglass shaft eyomeleleyo, eneembambo ze-fiberglass eziyi-8, ezivumela ubhetyebhetye ngakumbi. Ngale indibanisela iyingqayizivele ye-fiberglass, isambrela somelezelwa ngamandla okugqibela, kwaye iya kuqinisekisa ukuba isambrela asitshintshi ngaphakathi ngaphakathi kwimimoya enamandla yomoya
Isiphatho somgangatho womthi: Isiphatho esigwenxa sale ambrela izenzekelayo, yenza ukuba kube lula ukuthathwa, isambrela esine-J esibambe ijikaji sinokujinga kuyo nayiphi na indawo.
Ufuna ukwazi ngakumbi ukukhubazeka nge-imeyile info@ovidaumbrella.com
Into NO.: I-OV10014
Umbala wePlastiki oMnyama oCocwe nge-16 Iimbambo ze-Umbrella e-Transparent nge-Handle egobile
Transparent Ecacileyo Umbrella, Isiphatho Eside Iimbambo ezili-16 zeSambrela zemvula Abafazi Amantombazana Izixhobo zemvula zangaphandle
I-Adult Shaft eyomeleleyo Bubble Bubble ngaphaya yePlastiki yePlastiki ecacileyo yeDome 16 iimbambo ze-Umbrella
Uyilo lwesambulela ngokwezifiso luyasebenza. Kufuneka usithumele uyilo lwakho kuinfo@ovidaumbrella.com, ukuthengisa kwethu, kunye nesebe le-R & D liya kwenza uyilo lwereferensi yakho.
Singamkela i-100pcs yama-ambulera amancinci amiselweyo kwizambrela zohlobo oluqhelekileyo, ezinjenge-23inch kunye ne-30inch isambulela sokugcina, i-21inch 3folding full ambrellas. Ke ukuba ufuna ukuzama ishishini leambrela kwintengiso yakho, ungabeka i-odolo ye-100pcs.
I-Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd ivelisa izakhelo zeambrela. Ngomzi-mveliso wethu wesakhelo, ixabiso lethu liyakhuphisana nezinye iifektri zeambrela. Sizimisele ukuba bonke abathengi banokusinika ithuba lokutyelela umzi-mveliso wethu. Singathumela izakhelo zeambrela kunye neambrela kwamanye amazwe. Nxibelelana neqela lethu lokuthengisainfo@ovidaumbrella.com
Egqithileyo I-Ovida yesiSayizi esiKhulu esiKhulu seAluminiyam iSambrela esiNkulu esiZenzekelayo seSitampu se-16ribs Umbrella
Okulandelayo: Isambrela se-Ovida isambulela sokwenza isambulela sokwazisa se-arc semvula
16 Wathetha Umbrella
isambrela esikhulu esikhulu
Cacisa i-Umbrella ngaphaya
Iambrela 16 Iimbambo